Itoobiya Oo Fashilisay Qorshe Cabdi Iley Kaga Baxsanayey Xabsiga, Tirada Dadka Loo Xidhay Iyo Qaabkii Wax U Dhaceen - Jigjiga Online
HomeSomalidaItoobiya Oo Fashilisay Qorshe Cabdi Iley Kaga Baxsanayey Xabsiga, Tirada Dadka Loo Xidhay Iyo Qaabkii Wax U Dhaceen
Addis Ababa (JigjigaOnline) – Dawladda Itoobiya ayaa fashilisay qorshe lasoo maleegay oo uu xabsiga kaga baxsanayey Madaxweynihii hore ee Dawladda Deegaanka Soomaalida, Cabdi Maxamuud Cumar, kaas oo muddo sannad ah ku xidhan xabsi ku yaalla magaalada Addis Ababa.
Ciidamada booliska Addis Ababa ayaa xidh-xidhay koox diyaarsan oo ku sugnaa agagaarka xabsiga Qality ee uu ku xidhan yahay Cabdi Iley oo ay ku socoto dacwado la xidhiidha tacaddiyadii uu ka geystay Dawladda Deegaanka Soomaalida muddadii uu xilka hayey, iska hor keen qowmiyadaha Soomaalida & Oromada, Rabshadihii ka dhacay magaalada Jigjiga xilligii xilka laga tuurayey iyo dembiyo kale oo dilal iyo dhibaataynta dadkii uu xukumayey ku jiraan.
Ma jiro war rasmi ah oo kasoo baxay Laamaha ammaanka, hase yeeshee kooxdan oo aan tiradooda iyo haybtooda midna la sheegin ayaa waxay isku urursadeen agagaarka xabsiga Qality ee uu madaxweynaha hore ku xidhan yahay.
Kooxdan ayaa waxa uu qorshahoodu ahaa in maalintii ay taariikhdu ahayd 5 Agust oo ku beegnayd Isniintii in ay dhexda u galaan madaxweynaha oo waqtigaas la geynayey maxkamadda, isla markaana ay hujuum hubaysan kula baxsadaan.
Warku wuxuu intaa ku daray in ciidamada boolisku ay ka war heleen oo ay gacanta ku dhigeen kooxdan uu diyaarsaday Cabdi Iley. Waxa kale oo ay ciidamadu gacanta ku dhigeen hub ay kooxdu ugu talo-galeen hawlgalkooda.
Maaha markii ugu horreysay ee Cabdi Maxamuud Cumar (Cabdi Iley) uu isku dayo inuu ka baxsado jeelka uu ku xidhan yahay, hase yeeshee horraantii sannadkan ayaa waxay ciidamada ammaanku sheegeen inuu isku dayey inuu ka dhaco daaqadda qol uu ku xidhan yahay oo xabsiga dhexdiisa ah, laakiin ay ciidamadu ogaadeen.
Waqtigaas hore ee uu Cabdi Iley isku dayey inuu xabsiga ka baxsado, xaaskiisa iyo hooyadii oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hortooda jidh-dil loogu geystay, ayna indhahooda ku arkayeen iyadoo la garaacayo.
Xeer Ilaaliyaha guud ee dalka ayaa bishii January ee sannadkan sheegay in xafiiskiisu uu soo gabo-gabeeyey baadhista kiiska Cabdi Iley, waxaana uu caddeeyey in dembiyada uu geystay ay tiro badan yihiin oo ay ku jiraan xattaa dad la gawracay sida xoolaha.
Waxa uu xeer Ilaaliyaha warqtigaas tibaaxay in 40 masuul oo kale oo ka tirsanaa xukuumaddii Iley inay ku raad-joogaan oo ay wali baxsad yihiin, halka masuuliyiin kalena dhawr jeer ay kasoo hor muuqdeen maxkamadda.
Si kastaba ha ahaatee, falkan u dambeeyey ayaa waxa uu kusii kordhinayaa Madaxweynihii hore ee dhibaatada badan geystay, dembiyada loo haysto.